Iyintoni injongo ephambili ye-SEO yenkampani eqhuba ibhizinisi elincinci?
Namhlanje, siza kujonga i-SEO njengendlela yokuthengisa ngokukodwa kwiinkampani ezincinci. Ndiza kubelana ngako konke endikufundileyo ukusebenza kunye neeprojekthi ezincinane ze-SEO. Injongo yam kukukunceda ngolwazi ukwenza izigqibo ezicatshulwa kakuhle xa uqhuba isicwangciso se-SEO. Ngoko, kufuphi nendawo - payroll software price.
Gxininisa kwizinto ezibalulekileyo
Inyaniso kukuba i-SEO yamashishini amancinci ayikho nzima kunokuba ibonakale ekuqaleni. Ungakwazi ukuphucula kakhulu i-Google rankings kwaye ukhange iindwendwe ezininzi kwiziko lakho ngokugxila ezintweni ezine eziphambili-ezivelisa umxholo ochaphazelekayo, ukhetha amagama angundoqo, ukwenza ukulungiswa kwesayithi kunye nokwakha i-backlinks. Masiqwalasele ngokukodwa kwizinto ezifunekayo ze-SEO.
Le ngongoma yokuqala kwinkqubo ye-SEO yamashishini amancinci
.Injongo yakho kufuneka ukuba ukhethe amagama asemqoka afanelekileyo kwishishini lakho. Cinga ngala magama adibanisa ebhokisini lokukhangela xa wenza umbuzo wokukhangela. Zama ukukhetha amagama angundoqo awanako ukukhuphisana kakhulu kubhajethi yakho. Okukhethwa kukho kukuzikhawulela ukuya ezintlanu ukuqala. Ngokwenza njalo, kukho ithuba elihle lokuba uya kufumana iziphumo ezilungileyo kwibhajethi encinci.
Emva kokuba uyenziwe ngamagama angundoqo, yakha iphepha ngalinye lomxholo kwisithuba ngasinye. Khumbula, umxholo owenzayo kufuneka uhlangabezane neemfuno zabaphulaphuli bakho. Zama ukwenza umxholo wakho ube ngcono kunokuba sele usekuqaleni kwekhasi lamagama akhokhethiweyo.
Isinyathelo esilandelayo kukuba ungeze igama elingundoqo kwikhasi ngalinye kwi URL yekhasi, inkcazelo yeemeta, isihloko sephepha, kunye nomxholo wephepha. Ukongeza amagama angundoqo kulezo ndawo kuyona nto ibaluleke kakhulu ukuyenza ekubeni inemiphumo ebalulekileyo kwizinga lakho.
Ukuvelisa umxholo obalulekileyo kunye nokuzilungisa ngokuchanekileyo isiqingatha semfazwe. Esinye isiqingatha sonke malunga nenani le-backlinks esemgangathweni isayithi lakho. Ukuphakamisa phezulu kwiSesho lweGoogle, iwebhusayithi yakho kufuneka ibe ne-backlink ephezulu, ephezulu kunezinto ezisetyenziswayo okwangoku kuluhlu kwiphepha lokuqala lelo gama elingundoqo.
Ukuchazela i-backlink leyo loo masayithi asele ekhosini lokuqala le-Google unendawo efanelekileyo ukuqala. Fumana ukuba iziphi izixhobo ezidibanisa kubo kwaye ubuze ukuba ziya kudibanisa kwindawo yakho. Enye ingcinga efanelekileyo kukucela abalingani, abathengi okanye abahlobo ukuba baqhagamshelane nesayithi lakho. Oku kunokukunceda ukwakha ubudlelwane kunye namashishini ahlonelwayo kunye neeblogi ezidumileyo ezifanelekileyo kwiwebhusayithi yakho.
Kufuneka uqonde ukuba i-SEO ithatha ixesha. I-Google ingenakho ukuthenga i-backlinks ozifumanayo kwiiveki. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza okanye emva koko izithuba zakho ziza kuphucula, kwaye uza kufumana iindwendwe ezininzi kwiwebhusayithi yakho yenkampani.